တရုတ် AT Series Pneumatic Actuator စက်ရုံနှင့်ထုတ်လုပ်သူများ Convista
Operating medium: အပူပိုင်းသို့မဟုတ်ချောဆီကိုလေ၊ non-corrosive gas များသို့မဟုတ် oil
2. လေထုထောက်ပံ့ရေးဖိအား: ကို double သရုပ်ဆောင်:2~ 8Bar; နွေ ဦး ပြန်လာ:2~ 8Bar
စံသတ်မှတ်ချက် (-20 ℃ ~ 80 ℃)
အပူချိန် (၁၅၀ Up အထိ)
4. ခရီးသွားညှိနှိုင်းမှု: 90 °မှာအလှည့်များအတွက်±4°၏ညှိနှိုင်းမှုအကွာအဝေးရှိသည်
5. ချောဆီအရည်ကြည် - ရွေ့လျားနေသောအစိတ်အပိုင်းများအားလုံးသည်ချောဆီများဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားပြီးသူတို့၏သက်တမ်းကိုတိုးသည်
7. မက်စ်အလုပ်ဖိအား: ထက်နည်း 8Bar
၁။ ကျွန်ုပ်တို့၏ pneumatic actuators အားလုံးသည်နိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်ကိုက်ညီစေရန် NAMUR mounting ကိုတပ်ဆင်ပြီး limit switch, positioners နှင့်အခြားအလိုအလျောက်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၏ရိုးရှင်းသောတပ်ဆင်မှုကိုခွင့်ပြုထားသည်။
2. အမြင့်ဆုံးတိကျမှုနှင့်ပေါင်းစပ်မှု၊ အနီကယ် - အလွိုင်းသံမဏိဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော ISO5211, DIN3337, NAMUR ၏နောက်ဆုံးပေါ်စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်လည်းအပြည့်အဝကိုက်ညီသည်။ အရွယ်အစားနှင့်ပစ္စည်းများကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
၃။ မတူညီသောလိုအပ်ချက်များအရ extruded အလူမီနီယံအလွိုင်း ASTM6005 Body ကိုခိုင်ခံ့သော anodized, power polyester ဖြင့်ဆေးသုတ်နိုင်သည် (အပြာရောင်၊ လိမ္မော်၊ အဝါရောင်စသည်ဖြင့်ကွဲပြားခြားနားသောအရောင်များ၊ PTFE သို့မဟုတ်နီကယ်ဖြင့်) ။
(၄) Die cast cast aluminium alloy သတ္တုပါဝါ၊ PTFE နှင့်နီကယ်ဖြင့်ပက်ဖြန်းနိုင်သည်။
(၅) Twin Rack Pistons များကို Die an-cast aluminium နှင့် Hard anodized ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောသို့မဟုတ်သံမဏိဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောသံမဏိဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ သံလိုက်တပ်ဆင်မှုအနေအထား၊ ရှည်လျားသောသံသရာသက်တမ်းနှင့်မြန်ဆန်သောလည်ပတ်မှု၊ ပစ္စတင်ကိုရိုးရှင်းစွာပြောင်းပြန်လှန်ခြင်းဖြင့်လည်ပတ်မှုကိုပြောင်းပြန်ပြောင်းသည်။
6. နှစ်ခုလွတ်လပ်သောပြင်ပခရီးသွားရပ်တန့်ညှိနှိုင်းမှုသော့ခလောက်အလွယ်တကူနဲ့တိကျစွာပွင့်လင်းခြင်းနှင့်အနီးကပ်လမ်းညွှန်နှစ် ဦး စလုံးမှာ±5°ချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်။
၇။ ကြိုတင်တပ်ဆင်ထားသည့်ဖုံးအုပ်ထားသောစမ်းရေများသည်အရည်အသွေးမြင့်မားသောပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီးအကျင့်ပျက်ခြစားမှုကိုခံနိုင်ရည်ရှိစေပြီးသက်တမ်းပိုရှည်စေသည်။ ၎င်းသည်စမ်းရေ၏ပြောင်းလဲမှုအားဖြင့်အမျိုးမျိုးသော torque လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်လုံခြုံစွာနှင့်အဆင်ပြေစွာရှုတ်ချနိုင်သည်။
ရှေ့သို့ DRG စီးရီးအကြီးစား Duty Pneumatic Actuator
နောက်တစ်ခု: T အမျိုးအစား filter
ပိတ်ထားသောနွေ ဦး ပေါက်အပြည့်အဝထွင်းဖေါက်အမျိုးအစားကိုဘေးကင်းလုံခြုံမှုအဆို့ရှင်
DRG စီးရီးအကြီးစား Duty Pneumatic Actuator